Awusoloko ubamba isandla somntwana wakho, ngokukodwa xa kuziwa esikolweni, kodwa akuthethi ukuba awukwazi ukunceda xa umntwana wakho wesine weganga elwa novavanyo lokufunda . Akunakufuna ukubandakanyeka kwakho, kodwa ukuba iimfuno zabo azifikelelwa esikolweni, ezi ncwadi zokufunda zokuqonda ziya kukunceda ukwandisa isandla xa abantwana bakho befuna ukuhamba bodwa.
Iincwadi zokuqonda zokufunda ezizantsi ziya kukunceda ukhokele umntwana wakho ekuqondeni okungcono izifundo nezifundo ezahlukeneyo ngelixa uwakhiwa izakhono eziyimfuneko ukuze uphumelele esikolweni.
Ukuqonda ukuFunda, iBanga lesi-4 (Abakhi bezakhono)
Abakhi beZakhono. Carson Delossa
Umbhali: uAshley Anderson no-Elizabeth Swensen
Umshicileli: Carson-Dellosa Publishing
Isishwankathelo: Incwadi yokusebenzela izakhono zeBakala 4 amaziko okufunda okuyisiseko kunye nesigama sokwakha izakhono kunye nezicatshulwa ezingenanto kunye neengcamango eziqingqiweyo.
Ukufunda iZakhono zoBuchule: Ukufumanisa ingcamango ephambili, usebenzisa izikhokelo zenkcazelo yokuqonda isigama, ukulandelelanisa, ukwenza inkcazo , nokuchonga iinkcukacha ezisekelayo.
Ixabiso: Ngexesha lokunyusa, ibhuku leencwadi liye ukusuka kwi-$ 2.45 - $ 4.99 kwi-Amazon
Kutheni Uthenga? Ukuba umntwana wakho adinga ukulungiswa kobuGcisa beeLwimi kwaye uthuthuke ngokulula ngokuprinta okumnyama nokumhlophe, le ncwadi yokusebenzela iyitikiti kuphela. Akunakuphela kuphela iphepha elinemibala eliza kubancedisa ukugcina abantwana bebandakanyeka, izakhono ezibandakanywe kufuneka zincede abantwana bakhusele ezo zinto ezisisiseko ezingahle zilahleke.
Ukuqonda ukuFunda kweBakala leSine (Impumelelo yeencwadi zeSyvan)
ISylvan yeBanga le-4 lokuFunda. Random House, Inc
Umbhali: I-Sylvan Team
Umshicileli: Random House, Inc.
Isishwankathelo: Umbala ogcweleyo we-Sylvan wencwadi unceda abalimi abane ukuba babe ngabafundi abangcono kunye nemisebenzi ephandwe kakhulu. I-Check-it iqhosha kwicala lombuzo ngamnye lombuzo unceda abafundi ukuba basebenze ngokuzimela.
Ukufunda iZakhono zoMsebenzi: Ukuqhathanisa nokuchasene, ukuqikelela inyaniso kunye nembono, ukufumana ingcamango ephambili , ukusebenzisa izikhokelo zenkcazelo ukuqonda isigama, ukulandelelana, ukwenza inkcazo, nokuchonga iinkcukacha ezisekelayo.
Ixabiso: Ngexesha lokunyusa, ibhuku leencwadi liye laphuma kwi-$ 6.29 - $ 11.34 kwi-Amazon
Kutheni Uthenga? Le ncwadi kunye nezinye iincwadi zokufunda eziphuhliswe nguSylvan, ziye zaphumelela kwi-Honours Award kwi-National Parenting Publications Awards (NAPPA) njengoluhlu oluphezulu lweencwadi kubantwana abakwinqanaba elidala. Uphumelele!
Ukufunda, iBakala 4 (iTectect)
U kufunda. I-Carson-Dellosa Publishing
Umbhali: Iqela leMidlalo
Isishwankathelo: Ukuba ufuna ukusetyenziswa ngokubanzi ngetoni yemibuzo yokufunda kunye nezinto zokufunda, kunoko. Iqukethe izikhokelo ezilula ukuqonda kwaye ihambelaniswe ngokucacileyo kwimigangatho kazwelonke nakwilizwe.
Ukufunda Iikhono zoLwazi: Isigama, ukuhlaziya, ukuqhathanisa nokuchasene, ukucacisa inyaniso kunye nombono, ukufumana ingcamango ephambili , ukusebenzisa izikhokelo zengcamango ukuqonda isigama, ukulandelelana, ukwenza inkcazo, nokuchonga iinkcukacha ezisekelayo.
Ixabiso: Ngexesha lokunyusa, ibhuku leencwadi liye ukusuka kwi-$ 3.32 - $ 9.61 kwi-Amazon
Kutheni Uthenga? Umqulu. Inani lamabali, iicatshulwa ezingenanto kunye nemibuzo ehambayo ingentla naphaya kwezinye iincwadana. Ngaphezu koko, izinto ezigqibeleleyo kubafundi bazalise iphepha ngelo xesha. Iphepha elinye alikho enye. Ihlobo elihle lithenga!
Ukungaqondakali kokuFunda okungabonakaliyo: Izifundo zoLuntu, iBakala 4
Ukuqonda ukungaqondakali kokuFunda. Utitshala Udale izibonelelo
Umbhali: uRuth Foster
Umshicileli: Ufundisi udale izixhobo, LLC
Isishwankathelo: Le ncwadi, ehambelaniswe nemigangatho karhulumente, ifanelekileyo kwintsana engenakunyani. Amabali agxininiswe kwiinkalo zentlalo, ukusuka kwiimboniso zeBraille ukuxela i-Buffalo Soldiers kwigama elidumileyo likaJohn Paul Jones.
Ukufunda iZakhono zoMsebenzi: Ukuqhathanisa nokuchasene, ukuqikelela inyaniso kunye nombono, ukufumana ingcamango ephambili , ukusebenzisa izikhokelo zengcamango ukuqonda isigama, ukulandelelana, ukwenza inkcazo, nokuchonga iinkcukacha ezisekelayo.
Ixabiso: Ngexesha lokunyusa, ibhuku leencwadi liye ukusuka kwi-$ 9.88 - $ 16.99 kwi-Amazon
Kutheni Uthenga? Abazali banikela le ncwadi ye-4.5 / 5 neenkwenkwezi kunye nootitshala bayayithanda, nabo. Le ncwadi ichaneke kakhulu - imibuzo emihlanu ilandelelanisa isahluko ngasinye sokufunda - ngoko ukuba inkwenkwe yakho ingafuni ukwenza imicimbi yemisebenzi eyahlukileyo, ke le yiyitikiti yakhe.
Ziziphi iiNtebe ezingama-5 zeKhemistry?
UFilipu Ukhawuleza Kanjani?
Ukuzama ukubulawa kokuqala kuMusololini
I-Jack Kirby yeyona ndawo iphezulu kakhulu
Admissions kwiKholeji yaseTouro
Ukuguqula iiKilogram kwiGrafu
ILibra inyanga (iTransit) - Imoya kunye neNzekayo
2 I-Digit Addition Worksheets ne-Regrouping